» बिनोद ट्रेण्डिङमा आउनुको रहस्य
बिनोद ट्रेण्डिङमा आउनुको रहस्य
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार ०८:३१
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ३० साउन । बिनोद, शब्द अथवा नाम आजभोलि युट्युब ट्रेण्डिङमा छ । तपाईले बिनोद भनेर गुगल सर्च गर्नुभयो भने पनि यसका कयौँ जानकारीहरु पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईको भिडियोमा पनि धेरै पटक बिनोद कमेन्ट आएको होला । लाईभ भिडियो अथवा जुनुसुकै प्रकारको भिडियोमा पनि बिनोद शब्द आजभोलि कमेन्ट गरिन्छ ।
सुरुसुरुमा बिनोद शब्दले मानिसहरुमा एकप्रकारको डर पैदा गरेको थियो । मानिसले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोमा बिनोद शब्द लेखिन्छ त्यो बाहेक अरु केही लेखिँदैन । धेरैले बिनोद लेख्ने मानिस ह्याकर हुनुपर्छ र यसले हाम्रो च्यानललाई पनि ह्याक गर्न खोज्दैछ भन्ने भ्रम भईरहेको थियो । तर वास्तवमा बिनोद नामको पछाडि एउटा रहस्य छ, एउटा रमाईलो कथा पनि छ । वास्तवमा बिनोद को हुन् ? अनि यो कसरी ट्रेण्डिङमा आयो त ? आज हामी तपाईलाई त्यो विषयमा जानकारी दिँदैछौँ । हेर्नुहोस् यो भिडियो–
ईन्टरनेटमा कहिलेकाँही कुनै शब्द वा टपिक निक्कै भाईरल हुन्छ । त्यसमा कुनैमा खास कारण हुन्छ भने कुनै त्यत्तिकै पनि भाईरल भईदिन्छ र ट्रेण्डिङमा पनि आउँछ । यो बिनोदको पछाडि पनि खास त्यस्तो कुनै कारण थिएन जसका कारण यो भाईरल भईदिओस् । तर अचम्म यसले अहिले ईन्टरनेटको संसारमै भुकम्प ल्याईदिएको छ । सम्भवत यो २०२० मा अचम्म लाग्दो तरिकाले भाईरल भएको पहिलो टपिक हो । वास्वतवमा बिनोद एक व्यक्तिको नाम हो । उनको पुरा नाम बिनोद थारु हो । विनोद थारु नामक उक्त व्यक्तिको बिनोद थारु नामबाटै युट्युब च्यानल पनि सञ्चालनमा छ ।
उक्त व्यक्तिले जुनसुकै च्यानलको भिडियोमा बिनोद लेख्ने गर्छन् । उनले भिडियो हेरेपनि नहेरेपनि जुनसुकै लाईभ भिडियो होस्, प्रिमियरमा होस् वा अपलोड गरिएको भिडियोमा होस् सबैमा बिनोद लेख्न थाले । मानिसहरुले पनि बिनोदकै सिको गर्दै कमेन्टमा आफ्नो च्यानलको नाम लेख्न सुरु गरे । जताततै बिनोद नै बिनोद देखेपछि मानिसहरुले यो नामलाई रमाईलोको रुपमा कमेन्ट गर्न थाले । मानिसहरुले जुनसुकै भिडियोमा बिनोद कमेन्ट गर्न थाले । यस्तैमा भारतका एक युट्युबरले बिनोदको बारेमा रमाईलो भिडियो बनाए । स्याली पोईन्ट नामक उक्त च्यानलबाट कमेन्टहरुका विषयमा बनाइएको कमेडी भिडियोले बिनोदलाई झनै ट्रेण्डिङमा ल्याईदियो । उक्त भिडियो भाईरल भएपछि मानिसहरुले रमाईलाका लागि जुनसुकै भिडियोहरुमा बिनोद कमेन्ट गर्न थाले ।
यसरी यो बिनोद नाम भाईरल भयो । युट्युबमा यसअघि बिनोद थारु नामको एउटा मात्र युट्युब च्यानल थियो तर अहिले यो नामबाट हजारौँ च्यानलहरु बनिसकेका छन् अनि यसका विषयमा कयौँ भिडियोहरु पनि बनिसकेका छन् । वास्तवमा बिनोद कुनै स्पाम वा ह्याकरको नाम होईन, यो एउटा युट्युबरको नाम हो जुन अनायाशै भाईरल भएको छ । वास्तवमा बिनोदको वास्तविकता यही नै हो ।